Dawladda oo labajibaareysa lacagta ay ku kabto daryeelka ilkaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waxaa dalkaan raqiis noqon doona qofku markuu booqdo takhtarkiisa ilkaha. sawir: ANDERS WIKLUND / TT
Dawladda oo labajibaareysa lacagta ay ku kabto daryeelka ilkaha
Lacagaha lagu kabo daaweynta ilkaha oo la siyaadinayo
La daabacay fredag 15 september 2017 kl 09.18
Waxaa dalkaan raqiis noqon doona qofku markuu booqdo takhtarkiisa ilkaha.
Dawladda ayaa miisaaniyaddeeda deyrta ee ay usbuuca soo soda soo bandhigi doonto ku laba jibaari doontaa lacagta ay ku kabto daaweynta ilkaha taas oo aheyd qodob xisbiga Vänster-ku ku adkeystey.
Jonas Sjöstedt, hogaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet:
- Waxaan ognahay in dad badan oo lacag la’aani heyso ama mushaaro hoose qaataa aysan takhtarka ilkaha aadin xataa iyagoo u baahan, heer kasta oo qofka dhaqaalihiisu yahay waa in uu takhtarka ilkaha booqdaa, waana taas sababta aanu u laba jibaarney lacagta lagu caawinayo daaweynta ilkaha, ayuu yiri Jonas Sjöstedt.
Caruurta iyo dhallinyarada ayaa dalkaan xaq u leh in ilkaha lacag la’aan loogu daaweeyo, meesha dadka intaas ka weyn dawladdu sanad kasta qofkiiba ku kabto 300 oo karoon qiimaha daaweynta ilkihiisa ku baxda waana taas tan hadda dawladdu rabto in ay qiimahaas laba jibaarto laga bilaabo 15 april ee sanadka soo socda.
Dadka da’doodu u dhaxeyso 23 ilaa iyo 29 jir iyo waliba dadka da’doodu ka weyn tahay 65 jir ayaa 600 oo karoon sanadkii lagu kabayaa daaweynta ilkahooda, meesha dadka da’doodu u dhaxeyso 30 jir ilaa iyo 64 jir ay dawladdu ku kabi doonto daaweynta ilkahooda lacag dhan 300 oo karoon sanadkiiba.
Miisaaniyaddan cusub oo lagu siyaadinayo lacagaha lagu kabo daaweynta ilkaha ayaa dawladda ugu kici doonta qiyaastii 750 milyan oo karoon.